पर्दामा यौन दृश्य: ‘इन्टिमेसी कोर्डिनेटर’ को भूमिका... - Dainik Online Dainik Online
पर्दामा यौन दृश्य: ‘इन्टिमेसी कोर्डिनेटर’ को भूमिका…
प्रकाशित मिति : ११ बैशाख २०७८, शनिबार ११ : ३०
काठमाडाैं । हलिउड अभिनेत्री स्टोनले हालसालै एक राज सार्वजनिक गरेकी छन् । उनले बताए अनुसार सन् १९९२ मा सार्वजनिक भएको फिल्म ‘बेसिक इन्स्न्क्टि’मा भित्री–वस्त्र उतारेको उनको निकै चर्चित दृश्य झुक्याएर फिल्ममा राखिएको थियो ।
उक्त दृश्यमा उनले निभाएको पात्रले प्रहरी सोधपुछका क्रममा यस्तो गरेको हुन्छ । केही समय अगाडी प्रकाशित भएको आफ्नो संस्मरणमा उनले भनेकी छन्, ‘फिल्मको छयांकनको क्रममा उनलाई भनिएको थियो – आफ्नो अन्डरवेयर(भित्री वस्त्र) खोल्नुस् किनकि, सबै छायांकन सेतो रंग पर्दाको उज्यालोमा हुनेछ साथै दर्शकले केही पनि देख्ने छैनन् ।’
तर धेरै पछि उनलाई थाहा भयो खिचाएको दृश्यलाई उनले मात्र होइन, दर्शकले पनि देख्नेछन् । फिल्म निर्देशक पोल वर्होभनले शेरनले भनेको सबै कुरालाई अस्वीकार गरेका छन्, यद्यपि उनले शेरनले लगाएको सबै आरोप झुठ रहेको पनि दाबी गरेका छन् । तर शेरनले बताए अनुसार उनी त्यो समय आफूलाई नै ठगेको महसुस गरेकी थिइन्, जसले उनलाई चोट पुर्यायो ।
के यस्तो घृणाले भरिएको कहानीबाट बच्न सकिन्छ ?
भारतको पहिलो र प्रमाणपत्र प्राप्त यौन दृश्य निर्देशक(इन्टिमेसी कोर्डिनेटर) आस्था खन्ना भन्छिन्, ‘निक्कै सजिलो छ ।’ उनी भन्छिन्, ‘यदि म त्यहाँ भएको भए शेरनको छालाको अनुसारको रंगको अन्डरवेयर दिन्थे ।’
सन् १९९० को सुरुवातमा जब फिल्म ‘बेसिक इन्टिन्क्ट’ को छायांकन भएको थियो, त्यतिबेला कसैले पनि इन्टिमेसी कोर्डिनेटर’को नाम सुनकेका थिएनन् । जसले कुनै पनि कलाकालाई नग्न वा यौन दृश्य छायांकन गर्ने समयमा लचकता अपनाउँदै सहयोग गर्छ ।
यधपि, सन् २०१७ मा भएको ‘मी टू’ आन्दोलनपछि उक्त व्यक्तिहरुको माग धेरै बढेको छ । किन भने यस आन्दोलनको क्रममा मनोरञ्जन क्षेत्रमा भएको धेरै यौन उत्पीडनको घटना सार्वजनिक भएको थियो ।
सन् २०१८ मा एचबीओले घोषणा गरे अनुसार, सन् १९७० मा न्युयोर्कको सेक्स तथा पोर्न उद्योगमा बनिरहेको ‘द ड्युस’ सिरिजका लागि अभिनेत्री एमिली मीडको माग अनुसार पहिलो पटक इन्टिमेसी कोर्डिनेटर राखिएको छ ।
एचबीओ नेटवर्कका अनुसार एमिलीको सबै कार्यक्रममा अन्तरंग सम्बन्धि दृश्यमा इन्टिमेसी कोर्डिनेटरको निगरानी तथा सहयोग हुनेछ । अहिले अन्य प्लाटर्फमहरु जस्तै नेटफ्फिक्स र अमेजनले पनि यस्तै गरिरहेका छन् ।
योसँगै धेरै स्टुडियो, निर्माता तथा निर्देशकले आफ्नो सेटमा इन्टिमेसी कोर्डिनेटर राख्न सुरु गरेका छन् । पछिल्लो केही महिनामा भारतका फिल्म निर्माता तथा निर्देशकले पनि इन्टिमेसी कोर्डिनेटर राख्न थालेका छन् ।
इन्टिमेसी कोर्डिनेटरको काम के हो ?
२६ वर्षीय आस्था खन्ना भन्छिन्, ‘मेरो कामको तुलना एक्सन निर्देशक, डान्सर, कोरियाग्राफरको जस्तै हो तर सबै काम अन्तरंग दृश्यसँग मात्रै सम्बन्धित हुन्छ ।’
उनीले अगाडी भन्छिन्, ‘जसरी एक्सन निर्देशकले स्टन्टको समयमा उनीहरुको सुरक्षा गर्छन् त्यसरी नै इन्टिमेसी कोर्डिनेटरको काम नक्कली यौन दृश्य तथा यौन हिंसाको दृश्यको छायांकन गर्दा सुरक्षा सुनिश्चत गर्नु हो ।’ ‘इन्टिमेसी कोर्डिनेटरको काम निर्देशक र कलाकार बीचको सम्बन्धलाई मजबुद बनाउनु हो । ताकि, कलाकारलाई शोषण हुन नदिनुको साथै वर्षौपछि कलाकारले खराब महसुस नगरुन भन्ने हो,’ आस्था भन्छिन् ।
आस्था यस क्रममा आफ्नो सम्झौता र कलाकारको सीमाको विषयमा छलफल गर्छिन् । साथमा उनी सालिन तथा सभ्य कपडाको व्यवस्था गर्छिन् । उनको किटमा क्रोच गार्डहरु, निप्पल टाँस्ने टेपहरु, डोनट सिरानी हुन्छन् ।
यी सबै कुरा कलाकारलाई नक्कली यौन दृश्य छायांकन गर्ने समयमा एक अर्कालाई टाढा राख्न प्रयोग गरिन्छ । यसले गर्दा एक–अर्को कलाकारका शरीर सम्पर्कमा आउँदैनन् । मासिक धर्मको छोटो फिल्मको लागि ओस्कार अवार्ड जितेकी निर्माता मन्दाकिनी काकरको आगामी प्रोजेक्ट ‘पूर्ण रुपमा अन्तरंगता’मा आधारित छन् ।
जसको लागि उनी आस्था खन्नाको सहयोग लिदैछिन् । मन्दाकिनी भन्छिन्, ‘भारतमा मुख्यधारको सिनेमामा परम्परागत रुपमा सेक्स र नग्नतालाई बेवास्ता गरिन्छ । चुम्बनलाई समेत वर्जित मानिन्छ । किनकि, निर्माताहरु आफ्नै गैर पारिवारिक फिल्म बनाउन चाहदैनन् ।’
कडा सरकारी नियम र सेन्सर बोर्डका कारण बलिउड फिल्महरुले दुईओटा फूलहरुलाई छुने, चराहरुलाई चुम्बन गर्ने, उमालेको दुध बगिरहेको र ओछ्यानका तन्नाहरु बिग्रेको देखाउने जस्ता यौन र अन्तरंगका दृश्यलाई अत्याधिक रचनात्मक तरिकाले देखाइएको हुन्छ ।
यधपि, गत एक दुई दशकदेखि भारतीय फिल्ममा चुम्बनको दृश्य धेरै प्रयोग हुन थालेका छन् । साथै सेक्स र नग्नतामा पनि स्ट्रिमिन्ग प्लेटफर्महरुमा देख्न सकिन्छ । विशेषगरी युवा महिला कलाकार तथा नयाँ कलाकारमा अन्तरंग दृश्यको लागि भरोसा गरिन्छ ।
जुन कुरा उनीहरुको लागि निकै कठिन हुन्छ । यही समयमा उनीहहरु उत्पीडनको खतरामा पर्ने सम्भावना पनि धेरै हुन्छ । फेसन मोडलबाट अभिनेत्री बनेकी अन्जली शिवरमन नेटफ्लिक्सको एक नयाँ सिरिज ‘एलिट’ को छायांकन गरिरहेकी छन् ।
उनी भन्छिन्, ‘आस्था खन्ना सेटमा देखियो मात्र भने पनि धेरै राहत मिल्छ ।’ उनी अगाडी भन्छिन्, ‘म त्यो समय महसुस गर्छु मेरो लागि मेरो अगाडी कोही उभिएको छ । ’ ‘मलाई एक सेक्सको दृश्य गर्नु थियो । जुन मैले आजसम्म गरेको थिइन् । त्यो पनि एक नयाँ अभिनेताको साथमा जोसँग मेरो पहिलो भेट सेटमै भएको थियो । मलाई एक स्पोर्ट्स ब्रा र अन्डरवेयरमा मात्रै बस्नु थियो । त्यो समय म आफूलाई नग्न महसुस गरिरहेको थिए । म निकै चिन्तामा थिए ।’
‘म आफ्नो सह–अभिनेताको साथमा चुम्बन गर्न पनि डराइरहेकी थिए, उ मेरो लागि अपरिचित थियो । मलाई असहज महसुस भइरहेको छ भन्ने कुरा सेयर गर्न पनि मलाई असहज थियो किन भने निर्देशक नै एक पुरुष थिए ।’
आस्थाले मेरो लागि धेरै कुरा सहज बनाएकी छन् । उनले मेरो चिन्तालाई निर्देशक समक्ष साझा गरेर केही दृश्य हटाउन लगाएकी छन् । यस क्रममा सेक्स दृश्य दिँदैगर्दा डोनट र कुशनलाई हाम्रो अगाडी राखिदिइन् ताकि हाम्रो गुप्ताङगले एक अर्कालाईे छुन नसकोस् । तर यो समय निकै अजिब थियो यधपि, मलाई खुसी लागिरहेको थियो ।’
इन्टिमेसी कोर्डिनेटरको भूमिकामा आमा र म्यनेजरः
बलिउड अभिनेत्री तथा फिल्म निर्माता पूजा भट्टका अनुसार, उनी सुरुवाती दिनमा यस्तो प्रकारको दृश्य खिच्ने समय आफ्नो आमा र म्यानेजरलाई लिएर जान्थिइन् । जसले आधिकारक रुपमा इन्टिमेसी कोर्डिनेटरको भूमिका निभाउँथे ।
पूजा आफने अनुभव सुनाउँदै भन्छिन्, ‘अभिनेत्रीको रुपमा काम गर्दा मैले धेरै कुरा सिके । जब फिल्ममा निर्देशक तथा निर्माताको काम गरे अनि आँफैले इन्टिमेसी कोर्डिनेटरको भूमिका निभाउन तयार भए ।’
‘अन्तरंग दृश्यको लागि म सेटमा रहेका सदस्यलाई छान्थे ताकि अभिनेत्रीहरुलाई असहज महसुस नहोस् । सन् २००२ मा जब म ‘एरोटिक थ्रियटर’ बनाउँदै थिए तब मैल अभिनेत्री बिपाशा बाशुलाई एक महिला भएको नाताले असहज हुने काम नगर्न आग्रह गरेको थिए ।’
‘उक्त फिल्ममा केही नग्नता थिएन तर कामुकता थियो । उनलाई जोन अब्राहमको साथमा दृश्य लिनु थियो । मैले उनलाई भने – सबै दृश्य साँचो जस्तो देखिनुपर्छ तर तपाईं त्यस समयमा दुविधामा देखिनु हुँदैन । आफू कुन सीमासम्म काम गर्न सक्छु भन्ने कुरा आफैले निर्णय गर्नुपर्छ ।’
नेटफ्लिक्समा हालसाल ‘बम्बे बेगम्स’ सिरिजमा पूजा पनि देखिएकी थिइन् । सेटमा कोही इन्टिमेसी कोर्डिनेटर थिएन तर निर्देशक अलंकृता श्रीवास्तवले उनलाई सहज महसुस गराएका थिए,’ उनले भनेकी छन् ।
उनी भन्छिन्, ‘अलंकृतार मैले अन्तरंग दृश्यको लागि लामो समयसम्म कुराकानी गरेका थियौँ । हामीलाई एक अर्कामा भरोसा थियो । हामीले निर्देशक र सह–अभिनेतालाई विश्वास गरेका थियौँ । त्यसैले म भावुक बनेर घर जाँदैन थिए ।’
सेटमा इन्टिमेसी कोर्डिनेटर भए काम गर्न निकै सहज हुने उनको बुझाई छ । ‘सेटमा इन्टिमेसी कोर्डिनेटर हुनु स्वागत गोग्य छ । त्यसैले अहिले सेटमा इन्टिमेसी कोर्डिनेटरको काम बढेको छ । यदि तपाई सेटमा यौन उत्पीडनको सिकार हुनु भयो भने तपाईसँग उजुरी गर्ने प्रमाणहरु धेरै हुन्छ । यो निकै राम्रो पक्ष हो ।’
समस्या अझै पनि छः
यौन दृश्यहरु खिच्ने क्रममा पैसा धेरै खर्च हुन्छ । आस्थाका अनुसार, यस प्रकारको दृश्यमा विश्वासको माहोल एकदमै कम हुन्छ । निर्माता तथा निर्देशकलाई पनि भोलिका दिनमा समस्या आउँछ किन भन्ने यो कसैको गोपनियतासँग जोडिएको हुन्छ ।
‘सटमा जसरी एक्सनको लागि स्टन्ट निर्देशकको आवश्यक हुन्छ । त्यसरी फिल्ममा अन्तरंग दृश्य छ भने मेरो आवश्यकता पर्छ,’ उनी भन्छिन् । परम्परागत रुपमा फिल्म निर्माण गरिरहेका निर्माता तथा निर्देशकले अन्तरंग दृश्यलाई सामेल गर्न चाहदैनन । तर पछिल्लो समय दर्शकको माग अनुसार फिल्ममा अन्तरंग दृश्य धेरै हुन थालेको पूजाको भनाइ छ ।